Raharaha Remenabila – Omby an’arivony maro miparitaka any anaty ala - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Raharaha Remenabila – Omby an’arivony maro miparitaka any anaty ala
Asa hafa fanampiny ho an’ireo mpitandro ny filaminana mampandry tany sy manenjika an-dRemenabila sy ny tariny any Befotaka indray koa izao ny fanangonana ireo omby an’arivony maro miparitaka any anaty ala manodidina an’Iabohazo sy Esira.
Omby avy nangalarin’ireo dahalo avokoa ireo votsotra ireo, araka ny fantatra. Voalazan’ireo mpitandro ny filaminana any an-toeana anefa fa tsy ho mora ny fanangonana ireo omby ireo noho ireo toerana misy azy ireo mifanalavitra.
« Avy eny ambony helikoptera no nahitana ireo omby ireo. Miezaka manangona ireo omby rehetra ireo izahay izao mba hahatongavan’izy ireo ao Esira. Rehefa nihahenjana ny fikarohana an-dRemenabila tanterahin’ny mpitandro ny filaminana dia votsotra avokoa ireo omby ireo satria dia voatery miafina ireo dahalo. Tombanana ho manodidina ny efatra na dimy andro anefa vao mety ho voaangona avokoa ireo omby ireo », hoy ny mpampita vaovao avy amin’ny zandary any an-toerana.
Mbola mitohy hatrany anefa, etsy ankilan’izay ny fikarohana an-dRemenabila. « Tsy mbola misy mieritreritra ny hody ny mpitandro ny filaminana aty. Efa nanome toky rahateo ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena, ny jeneraly Randrianazary fa tsy maintsy ho voasambotra io lehiben’ny dahalo io na ho ela na ho haingana », hoy ihany ny loharanom-baovao.
Omby, Remenabila, Mpanoratra Rijakely, 06.07.2012, 08:18	FIARAHAMONINA